Hindiya oo ku goodisay inay awood military Shiinaha uga difaacaneyso dhulka uu ku heysto | warsanradio baydhabo
Hoggaamiyaha mucaaradka dalka Ruushka oo dib ugu soo...
Sii-hayaha ra’iisul wasaaraha oo magacaabay guddiga munaasabadda xil...
Garsoore ka tirsanaa Maxkamadda Sare ee Mareykanka oo...
Madaxweynaha Peru oo ka bad-baaday isku day xilka...
Isku dhac ciidan oo Ruushka iyo Mareykanka ku...
Wasiir Oomaar oo faahfaahin ka bixiyey khasaaraha diyaarad...
Hoggaamiyaasha Turkiga iyo Giriiga oo kawada hadlaya khilaafka...
Home WARARKA MAANTA	Hindiya oo ku goodisay inay awood military Shiinaha uga difaacaneyso dhulka uu ku heysto
Hindiya oo ku goodisay inay awood military Shiinaha uga difaacaneyso dhulka uu ku heysto
written by Admin 20/06/2020
Hindiya ayaa wacad ku martay awood ciidan iney xadkeeda ku difaaceyso, kaddib marki 20 askari ay ka dileen ciidamada Shiinaha Isniinti la soo dhaafay.
Ra’isal Wasaaraha Hindiya Narendra Modi wuxuu sheegay wakhti xaadirkan iney jirin ciidama shisheeye oo ku sugan xadka Hindiya iyo dhul laga qabsaday toona.
Dalka Shiinaha qasaaraha ka soo gaaray dagaalka ciidamada Hindiya ay la galeen wax war ah kama soo bixin, tani iyo marka uu labada dal uu iska horimaadka uu ku dhex maray xadka Himalayan ee ay labada dal isku hayaan.
Labada dal oo ku hubeysan hubka Niyukilarka ayaa dalba dalka kale uu ku eedeeyey inuu xadka soo tallaabay dagaalkana uu billaabay.
Hindiya waxay sheegtay labada dalba qasaara inuu ka soo gaaray dagaalki ku dhexmaray buuraleyda Galwan ee ku yaalla Ladakh.
Ra’isal Wasaaraha Hindiya Narendra Modi oo Jimcihi shacabka dalka Hindiya telefishiinka kala hadlay wuxuu sheegay ciidamada Hindiya iney amar buuxa u haystaan “iney qaadaan tallaabbo kasta oo milatari” oo ay ku difaacayaan xuduudaha dalka Hindiya.
“Dalka Hindiya wuxuu si aad ah uu uga xumaaday ugana carooday tallaabbadii u Shiinaha ku dhaqaaqay, “ayuu yiri, isaga oo intaa ku daray “Hindiya nabad iyo saaxibtinimo iney dooneyso balse ay qaranimadeeda gorgortan ka galeyn.”
Mr Modi oo ka hadlay dagaalki Isniinti dhacay wuxuu sheegay, “iney gudaha xuduudda Hindiya xoogag shisheeye ku sugneen dhul ay Hindiya leedahayna aan la qabsan”.
Labada dal ayaa waxay 1996-kii ay galeen heshiis xadka ay labada dal isku hayaan ka manuucaya hubka iyo waxyaabaha qarxa.
Wararku waxay intaasi ku darayaan dagaalka xadka ku dhexmaray ciidamada Hindiya iyo kuwa Shiinaha in lagu dhaawacay ugu yaraan 76 askari oo Hindiya ah.
Hindiya oo ku goodisay inay awood military Shiinaha uga difaacaneyso dhulka uu ku heysto was last modified: June 20th, 2020 by Admin
Masar oo Golaha Ammaanka QM ka codsatay inuu soo farageliyo muranka Wabiga Nile
Dhageyso:-Maamulka Gobolka Bokool Ayaa Ka Warbixiyay Degaal Ka Dhacay Deegaanka Teed
DF oo si lama filaan ah ciidamo u geysay magaalada Jowhar + Ujeedka
Dhageyso: Gudiga Hey,ada Barakacyaasha Kg Oo Walaac Ka Muujiyay Xaaladaha Barakacyaasha Kg.
Dhageeyso:-Warka Fiidnimo ee Idaacada Warsan Caawa I noo haayso
Dhageyso:-Shariif Xasan Sheekh adana Madaxweyna KGS ayaa waxa uu ka hadley Waxa yaabaha Uu u Hormari waayey Maamulkiisa
Dhageyso: Gudoomiyaha degmada beledweyne ayaa wasaarada Xanaanada Xoolaha ka codsaday in wax loo qabto xoolo dhaqatada gobolka hiiraan
Dhageyso baaq ku aadan roobdoon ka dhacidoona magalada baydhabo maalinta berito,